Nidaamyada wax soo saarka Shiinaha ee soosaarayaasha casaanka birta iyo alaab-qeybiyeyaasha. Midabka Shencai
Waxaa jira laba geeddi-socod oo wax soo saar oo muhiim ah oo ah oksaydh cas: qalalan iyo qoyan. Maanta waxaan eegeynaa labadan geeddi-socod.
1. Geedi socodka qallalan
Nidaamka qallalan waa soo-saar dhaqameedka iyo asalka asalka ah ee habka wax soo saarka casaanka ee Shiinaha. Faa'iidooyinkeedu waa habka wax soo saarka fudud, socodka socodka gaaban iyo maalgashiga qalabka oo yar. Faa’iido darrada ayaa ah in tayada waxsoosaarku xoogaa liidato, isla markaana gaas waxyeello leh la soo saaro inta lagu gudajiro hawsha calcination, oo saameyn muuqata ku leh deegaanka. Sida habka calcination jarosite, tiro badan oo ka mid ah gaasaska ay ku jirto baaruudda ayaa la soo saaray inta lagu gudajiray howsha calcination-ka.
Sanadihii la soo dhaafay, iyadoo lagu saleynayo ka faa'iideysiga guud ee birta qashinka ku jirta, tikniyoolajiyadaha habka qalalan sida habka xabagta sulfuric acid iyo habka dubista aaladda asiidhku ku badan tahay ayaa ka soo ifbaxay dalkeenna. Faa'iidooyinka geeddi-socodkani waa geeddi-socod fudud iyo maalgashi ka yar, iyo faa'iido darrooyinka jira ayaa ah in heerka tayada wax soo saarka uu hooseeyo, oo kaliya lagu dabaqi karo meelaha hoose, iyo tiro badan oo gaasas waxyeello leh ayaa lagu soo saaraa habka wax soo saarka, taas oo saameyn weyn ayuu ku leeyahay deegaanka.
2. Nidaamka qoyan
Nidaamka qoyan waa in la adeegsadaa sulfate ferrous ama nitrate ferrous, sulfate ferric, nitrate ferrate sida alaabta ceeriin ah, iyadoo la adeegsanayo diyaarinta ugu horeysa ee iniinyaha, kadib oksaydhka si loo diyaariyo birta birta birta ah ee habka soosaarka cas. Qalabka ceyriinka ah ee la isticmaalay waxay noqon karaan sulfate ferrous ama nitrate ferries qalabka ceyriinka adag, ama xalalka biyaha ee ay kujiraan sulfate ferrous, nitrate ferrous, ferric sulfate iyo nitrate ferric. Dhexdhexaadiyaha la isticmaalay wuxuu noqon karaa xaashi bir ah, bir duug ah, alkali ama ammonia.
Faa'iidada habka qoyan waxay ku jirtaa tayada wanaagsan iyo waxqabadka alaabada. Noocyo kala duwan oo midabbo taxane ah oo oksijiin ah ayaa la diyaarin karaa. Faa'iido-darrooyinka waxay ku jirtaa geeddi-socodka dheer, isticmaalka tamarta sare ee habka wax soo saarka, iyo tiro badan oo gaaska qashinka ah iyo biyaha wasakhaysan ee aashitada ayaa la soo saaray. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira la'aanta qaab wax ku ool ah oo waxtar leh, oo saameyn weyn ku leh deegaanka.
Isku soo wada duuboo, waxaa jira noocyo badan oo ah habka wax soo saarka casaanka birta ah, geeddi-socodka wax soosaarka oo leh faa'iidooyin u gaar ah ayaa sii wadaya kobcinta horumarinta warshadaha midabka midabka birta leh, si loogu fududeeyo wax soo saarka dadka.